अनुहारको छालालाई चम्किलो र कोमल बनाउन भान्सामै बनाउनुहोस् यी ३ घरेलु औषधि ! – Krazy NepaL
February 3, 2021 494
मह र टमाटरले अनुहारमा आउने चाउरी र बुढोपन हटाउन मद्दत गर्छ । यसको प्याक बनाउनका लागि आधा कप टमाटरको लेदोमा १ चिया चम्चा शुद्ध मह मिसाउने र अनुहारमा लगाउने । १५ मिनेटसम्म उक्त प्याक अनुहारमा राखेर चिसो पानीले मुख धुने ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Prevपेटमा ग्यास भरिएर हैरान हुनुहुन्छ ? यी ५ मध्ये कुनै एक उपाय अपनाउनुहोस्
Nextयी ५ राशिका व्यक्ति हुन्छन् सबैभन्दा बुद्धिमान, पढाइ लेखाइमा पनि हुन्छन् अत्यन्तै तेज
महिलाले आफ्नै श्रीमानसँग पनि लुकाउँदछन् यी ७ कुराहरु थाहा पाइराखौ
कस्तो समयमा महिलाहरुलाई शारिरीक समन्धको चाहना बढी हुन्छ तपाइलाई थाहा छ ? जानी राखौ